AMP plug-in ine IFrame rutsigiro - SN
AMP plug-in yemapeji ane IFrames
Iyo Inokurumidzirwa NemaMapeji eMapeji (AMP) jenareta yekugadzira Google AMP mapeji , ma AMP plugins uye AMPHTML tag jenareta ine otomatiki kutendeuka kwemaframe mu <amp-iframe> ma tag.
<amp-iframe> tag kusangana
Iyo Inokurumidza Mobile Mapeji jenareta inozviona yega kana iframe yakaiswa pane rako peji uye inoshandura chero maiframes aanowana mu <amp-iframe> tag.
AMPHTML parizvino inongobvumira kurodha kwemukati iyo ine inoshanda HTTPS kubatana !
Iyo Inokurumidza Mobile Mapeji jenareta inoongorora otomatiki kuti iyo URL inoshandiswa mune iframe inogona zvakare kusvikwa kuburikidza neyakavharidzirwa HTTPS kubatana. Kuti uite izvi, iyo Inokurumidza Mobile Mapeji jenareta inongochinjana iyo 'HTTP' ye 'HTTPS' mu URL. Kana iyo URL inogona kuvhurwa neHTTPS, iyo Inokurumidza Mapeji eMapuraneti jenareta inoshandura iyo iframe muye inoenderana 'amp-iframe' tag uye zvakare inoita iframe yezvinyorwa kuwanikwa pane AMPHTML vhezheni.
Kana iyo URL isingakwanise kutakurwa neHTTPS, iyo iframe zvemukati haigone kuratidzwa zvakananga pane iyo AMPHTML vhezheni. Mune ino kesi, iyo Inokurumidza Mobile Mapeji jenareta inoratidza inotevera chinobata grafiki:
Nekudzvanya pane ino graphic, mushandisi anogona kuzarura iyo iframe zvemukati kuburikidza neisina kunyorwa 'HTTP kubatana'. Nenzira iyi, iyo IFrame zvemukati zvinogona zvirinani kuwanikwa kuburikidza neimwe mhinduro uye haina kunyatso kufuratirwa.